निषेधाज्ञामा पनि घट्यो डरलाग्दो घ’ट’ना - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
निषेधाज्ञामा पनि घट्यो डरलाग्दो घ’ट’ना
श्रीमान श्रीमतीको राम्रो सम्बन्ध थिएन । श्रीमानले आफ्नै मामाको छोरी बहिनीलाई सौता ल्याएका थिए ।
उनी आफ्नो सुर गरेर एक्लै बसेकी थिइन् । भरतपुर ६ मा भएको एउटा घटना भएको छ । दुई दिन अघि सासुको निधन भएपछि पार्वती भट्टराई किरिया बसेकी थिइन् ।
उनको त्यही बेलामा ज लेर निधन भएको छ । तर पार्वतीका माइतीले भने रहस्यमय भएको बताएका छन् । भाई वुहारी सम्झना ढकालले भनिन्, सुतीको कपडा लगाएर किरिया बसेको महिलाको तोरी राखेर बालेको बत्तीले कसरी आगो लाग्यो भन्ने शंका लाग्यो ।
उनले मान्छे माथि कसरी शंका गर्नु ? यस्तो घटना कसरी भयो भन्ने कुरामा शंकामा छौं । उनको भदा बुहारीले पनि घटना संकास्पद भएको बताइन् । उनले
घटना भएको बेलामा आफुले नदेखेपनि घटना भइसकेपछि आफुलाई बोलाएको र जाँदा गाडीमा राखिएको थियो । पार्वती भट्टराई आत्तिएको अवस्थामा आफुले देखेको बताइन् । मलाई आमाले संगै संगै लैजान थाल्नुभयो । म जान्छुहोला भन्नुभएको थियो, वुहारीले भनिन् ।
परिवारमा उनको सम्बन्ध त्यती राम्रो नभएको उनीहरुले बताएा छन् । धेरे वर्ष भयो दिदी र भिनाजु अलग बस्न थालेको उनले बताइन् । एक वर्ष देखि श्रीमान घर बनाएर नजिकै सरेको बताइन् । छिमेकीहरुले पनि घटना रहस्यमय भएको बताएका छन् ।
उनीहरुले त्यती ठूलो घटना हुँदा पनि एउटै घरमा भएका अरुले किन थाहा पाएनन् ? स्थानिय छिमेकीको भनाई छ। अन्य समाचार दशा आफुलाइ जतिसुकै सबारे पनि, आफ्नो नामको अगाडी-पछाडी जतिसुकै बिशेषणहरु जोडेपनि, जस्तोसुकै सुविधा संग जिवन बिताए पनि, जिवनमा जतिसुकै उपलब्धि गरेपनि, हामीलाइ एउटा धृणित सत्यको दुर्गन्धले सधै पछ्छाई राख्ने छ
त्यो हो हामी संसारको कंगालतम् देशहरु मध्यको एक देशका नागरीक हौ। कारण के हुन सक्ला? के हामी भोतिक रुपमा मात्र गरिब छौ? यी प्रश्नहरु आज हाम्रो समाजले आत्म समालोचना गर्नको लागी सोध्नु पर्ने भएकोछ।
हाम्रा हिमालहरुले हामीलाई प्रसस्त बिदेशी मुन्द्रा दिन सक्छन; तर हामीलाई पर्यटन ब्यबसायको ज्ञान छैन, बिदेशीमुन्द्रा तान्नसक्ने कला छैन; हामी त्यसैले गरिब छौ।सधै भुइचालो गैरहने समुन्द्री तुफानहरुले सताइ राख्ने भुमिलाई जापनिजहरुले, एक उदाहरणीय देशको रुपमा चिनाए। हामी जहिले पनि देशको भुपरिबेष्ठितालाई दोष दिदै उम्कन खोज्छौ।
यथार्थमा हामीलाई कंगाल बनाउने हाम्रो आफ्नो अप्रगतिशील समाजिक संरचनाहो, हाम्रो आफ्नो गलत धारणा हो, हाम्रो आफ्नो कुसंस्कार हो, हाम्रो आफ्नो आलशीपन हो, हाम्रो आफ्नो दुर्गतिशील बिचारधारा हो।
गरीब देशका गरीब नागरीक हामी नेपाळिका लागी दुख एक घनिष्ठ सम्बन्धी हो, जहांकी आजभन्दा २५०० बर्ष अघी, यस धर्तीका एक महापुत्रले संसारलाई दुख बिनासको बाटो देखाएका थिए। ति महापुरूष बुद्ध का बाणीहरु आजपनि परिशुद्द अबस्थामा पाईन्छन्।
शिद्दार्थ गोतम जीबनका दुखलाई देखेर ती दुखबाट छुटकारा पाउने बिध्या खोज्न हिडेका थिय। छ बर्षको खोजि पछि उहांले दुख नास गरने बाटो पत्ता लगाएको ऐलान गर्नु भयो र त्यो बाटोमा हिड्न सिकाउदै हिड्नु भयो। आज आफुलाइ बिद्वान मान्दै हिड्नेहरु, बिषयको जानकारी बिना प्रतिकृया दिन मन पराउछन्, तर बुद्धको मातृभुमिमा उहांको शिक्षाको बारेमा जान्ने मान्छेहरु नगन्य मात्रामा छन।